You na-aiming ịsụgharị LFS (Linux Site ọkọ)? | Site na Linux
Carlos Gude | | Nkesa
Linux Site ncha bụ ụzọ iji wụnye usoro GNU / Linux na-emepe emepe akụrụngwa niile. Nke a bu usoro kariri ihe kariri itinye ya Linux nkesa eburu ụzọ. Dị ka saịtị nke Linux Site ncha, uru nke usoro a bụ kọmpat, mgbanwe na nchekwa ma na-enye nnukwu ihe ọmụma banyere otu sistemụ arụmọrụ GNU / Linux si arụ ọrụ.
LFS bụ oru na niile ihe nkesa anyị ga-amarịrị, ọ bụ maka ikpokọta, imepụta, nkwakọ ngwaahịa na ịhazi nkesa nke aka anyị ruo n'ókè nke enweghị ike ọgwụgwụ. Nọmalị a nkesa na-gbakwasara nke abụọ ụdị ọrụ, J.Randall na ọchịchọ ịmata (m na-agụnye onwe m na nke ikpeazụ) na-eme ka echichi nke Arch (nke n'aka nke ọzọ dị mfe).
Ihe oru ngo a, dika oru oma obula, nwere akwukwo buru ibu mana o di n’asusu bekee, ya mere ndi n’asu asusu Spanish (Site n’akuku pond) o di obere karie otutu, karisia maka ndi jiri otutu peeji n’ime bekee ju anyi. . O di nwute, ntụgharị nke LFS Ọ rapaara na nsụgharị 6.3 ma anyị nọ ugbu a na 7.4, akwụkwọ ntuziaka ahụ gbasara peeji 340, nke maka ihe nkesa, bụ ọtụtụ ọrụ ma na-erite uru nke ọkà okwu a bụ NdokwaM ga-amasị gwa Abigel oru ngo a.
Anyị ga-achọ ndị ntụgharị na ndị na - agụgharị akwụkwọ, otu anyị dị, ọrụ anyị ga - arụ n'otu n'otu ga - emecha mechaa. Ndị debanyere aha, hapụ okwu ebe a na / ma ọ bụ zitere m email na carlos.sgude [na] gmail [dot] com with the title [Nsụgharị LFS], mgbe anyị dị ole na ole, m ga-emepụta listi nzipu ozi ma anyị ga-amalite kesaa ọrụ ahụ.
O doro anya, aga m akpọtụrụ ọrụ gara aga, site na listi nzipu ozi ha, iji hụ ma anyị nwere ike ịtụte ya ma tinyekwuo ndị mmadụ.
Echere m na ụdị ọrụ ndị a dị mkpa nakwa na otu obodo bara ọgaranya dị ka obodo Hispanic, nke na-enweghị nsụgharị maka asụsụ anyị, yiri ka ọ na-egbu m ma echere m na anyị kwesịrị ịchọta azịza.
Official oru ngo nke LFS: http://www.linuxfromscratch.org/
Ntụgharị asụsụ nke LFS: http://www.escomposlinux.org/lfs-es/
Peeji Wikipedia nke LFS: http://es.wikipedia.org/wiki/Linux_From_Scratch
M na-ahapụrụ gị vidiyo nke m hụrụ na nso nso a, site na 0 gaa KDE con LSF:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » You na-aiming ịsụgharị LFS (Linux Site ọkọ)?
Ebum n'uche gị dị m mma. Ọ bụrụ na anyị erute ezigbo ọnụọgụ, Gụzie m. Ana m ekwusi ike na ọnụ ọgụgụ dị mma n'ihi na enweghị m oge dị ukwuu, ma ọ bụrụ na ọ gbanwee na olu ọrụ dị oke ukwuu m ga-apụ na nko ahụ, mana nke mbụ m debanyere aka.
N'oge a, anyị bụ 1 (ihe nkesa) ruo mgbe m nwere mmadụ 5 ma ọ bụ 6, agaghị m eme ihe ọ bụla, mana m ga-atụ gị aka (kwa, zitere m email iji chebe gị)
Nwoke, otu Vigo ọzọ! 😀
Anọ m. Ọ bụ ezie na m na-ewere onwe m dị ka onye ọrụ dị elu, gịnị bụ ọrụ ahụ, anaghị m edozi ya, Linux toro m oke, mana m maara ede ihe, yabụ ana m enye onwe m dị ka onye nyocha ma ọ bụrụ na ịchọrọ.
Ire nụrụ ụtọ, compatriot xD
zitere email 😀
M debanye aha = D M na mbụ soro LFS akwụkwọ, M na-atụ ụjọ nke iche na echichi nke njiko «Mfe»
N'ezie ọ bụghị na mgbagwoju anya, (ka anyị hụ na ọ bụghị windo) naanị ị ga-etinye iwu ma mara ihe ha na-eme. Ozugbo ị nwetara sistemụ ntọala (minit 30 yana njikọ intaneti dị mma) ọ dị mfe, ọ bụrụ na ị nwere obi abụọ ị nwere ike jikọọ Arch wiki na lynks mgbe niile wee soro usoro ahụ.
Eresịrị m Arch dị ka nrụnye siri ike, mana ọ dị ka ọ bụghị nnukwu ihe nye m.
Kpọmkwem ee sir, ntinye njiko dị mfe ma ọ bara uru ịmara na ị ga-eburu n'uche ihe iwu ọ bụla na-eme.
Etinyere m Arch na ọkara ọkara elekere, na ọkara elekere ọzọ iji tinye aka. N'etiti Arch na Slackware, ha bụ ihe kacha mma KISS nke masịrị m ugbu a.
Ọ dị oke mma, enwere oru akpọrọ Duolingo, ọ gụnyere ndị na-amụ Bekee sụgharịa peeji nke ịntanetị, nyefee ntinye nke ibe a n'ebe ahụ, yabụ na mbido ị ga-enwe ọtụtụ puku ndị ntụgharị na ndị na-agụ akwụkwọ, mee atụmatụ ahụ 😀
ihe omuma dijo
M debanyere aha, amaghị m ọtụtụ ihe banyere Linux, mana achọrọ m ịmụ maka ya n'ihi na ọ masịrị m, abụkwa m otu n'ime ndị ahụ gụrụ ọtụtụ peeji na Bekee, o doro anya na amaara m Bekee, na ọkwa dị n'etiti, mana m ga-ahọrọ iji gụọ ozi ndị ọzọ n'onwe m. Asụsụ dị mma n'ọtụtụ ụzọ.
email m bụ: Candhich [@] gmail
Ibe akwukwo oru Facebook:
M debanyere aha na La Coruña. Nke a bụ ọrụ na-amasịkarị m na nke m chọrọ n'ezie, mana ọ ghọrọ nnukwu maka naanị m. Banyere.
Aghọtara m na ntụgharị asụsụ nke google abụghị ezigbo ntụkwasị obi. ma ọ bụ nke ọma ghọtara, iji maka oge.
Zaghachi ka miquel
Anọ m! Ezigala m akwụkwọ ozi ahụ, agbanyeghị m kwenyere na woqer, enweghị m oge dị ukwuu, yabụ enweghị m ike iburu nnukwu ọrụ.
Ndewo, site na Granada. Ọ bụrụ na ihe edoziri nke ọma, ị ga-atụkwasị m obi.
Ọ bụrụ na ị nweta ezigbo ego nke ndị ọrụ afọ ofufo, tụkwasị m 😀
Aga m debanye aha ma ọ bụrụ na ha ka chọrọ ndị mmadụ 🙂
Debanye aha m, tinye ụtọ m nwere maka nsụpe, ụtọ asụsụ na ide ede nke ọma.
okporo ụzọ dijo
Zaghachi onye na-aga n'okporo ụzọ
Ọ dị m nwute, ọ meghachiri
Edebanye aha m, debanye aha m
Jisie na oru gi, achorom inye onyinye ma achoro m na asusu bekee m, o bughi isi, adighi n'ogo nke ihe ntughari oru a choro.
Na-ekelekwa gị n'ihi na nke gị bụ naanị nzube nwere nzube pụtara na blọgụ a (otu ọ dị mma) ogologo oge
Nwere ike ịbụ onye editọ, ị nwere ike ịgba ọsọ na wiki, ị nwere ike ịme ọtụtụ ihe, zitere m email gị na anyị ga-emere gị ohere !!
Achọrọ m ma anọ m na oge XD
Site n'ụzọ, ịwụnye Gentoo site na stage1 yiri nnọọ
Abụ m onye ọrụ gentoo, achọrọ m ntakịrị ma kwere m, ntakịrị ihe karịa na m gaara akwatu Debian site n'obi m dị ka ezigbo distro na ọ bụ, ọ na-ahapụ arch dị nnọọ ukwuu.
M debanyere, zitere email. 🙂
Zaghachi ka isaky
Ana m ebido Linux. Ogologo bekee m bụ nke etiti (Ana m akwadebe ọkwa B2). Ọ bụrụ na m nwere ike inyere gị aka email m bụ mandarinafly@outlook.es.
ke torrealba dijo
Enwere m ihe omuma a nabatara n'asụsụ Bekee na m hụrụ Linux n'anya.
Soro ndi otu a
Zaghachi ken torrealba
Ana m ewepụta onwe m.
Enwere aka ozo diri gi 🙂.
Dabere na m.
Ezigbo atụmatụ! Ahụrụ m na e nwere ọtụtụ ndị nwere mmasị. Ekwesịrị itinye post a na ngalaba "Akwadoro"
Ndewo, enwere m ihe ọmụma bekee dị na etiti, obere ọfụma, na Linux enwere m olile anya na m ga-enwe ike ịmekọrịta, n'oge m nwere oge, mana emesịa agaghị m enwe oge ahụ.
Ndewo, ọ ga-amasị m ịmekọrịta, echere m na ezigaghị okwu ahụ n'oge gara aga, enwere m ọkwa etiti, enwere m ntakịrị asụsụ bekee, amakwaara m Linux ogologo oge, email m bụ elu1996@hotmail.es
M debanye aha!
M debanyere aha maka ntụgharị asụsụ ahụ.
Mgbe na olee otu anyi si amalite?
Anọ m. Achọrọ m inye onyinye m nke ájá ọbụlagodi na ọ pere mpe.
M debanyere aha
Zaghachi nye ercabla
Abụ m onye ọrụ Archlinux ugbu a, echere m na ọ bụ ezigbo distro, ma eleghị anya, n'oge na-adịghị anya, m ga-akwaga na Gentoo nke bụ ihe ịma aka m ọzọ na nso nso a ka m gụrụ ihe ndị a:
ka m gụrụ na nnọkọ na na ndụ nke Linux ọ bụ otu a:
ubuntu, fedora, opensuse, wdg ..> ụlọ akwụkwọ
Archlinux, slackware, crux> njikere (ma ọ bụ kọleji)
LFS [Linux si ọkọ]> PhD
hahahaha ekwesighi ka ewere ya nke oma, mana dika inwere ihu, nsogbu siri ike xD
si Helena Ryuu na G + (https://plus.google.com/u/0/111770502894592063090/posts/gYnGSVdErPW), n'ihi na m na kasị mgbagwoju anya distro n'ime Gnu / Linux ruo ụbọchị bụ Gentoo, ma ọ dịghị mgbe ndụ m dị ka onye ọrụ m nụrụ banyere LFS, m nwere mmasị, m malitere na-achọ ozi na m na-eche otu ihe ahụ, taa Agụrụ m post a ma eche ma ọ bụrụ na enwere ihe ọ bụla, ana m etinye onwe m na otu ugbu a, m na-eziga email ahụ, m ga-achọ ịma ihe nsonaazụ ya bụ
Apensas achọpụtara m ma m ka nwere ike inye aka.
Ọ bụrụ na ọnụọgụ dị mma abịarute, dee m maka na enwere m ọkwa bekee na-anabata nke ọma ma amaara m usoro Linux nke ọma, esokwara m akwụkwọ ahụ na amaara m usoro njikwa ngwugwu nke na-arụ ọrụ na isi mmalite ma ọ bụ na ọnụọgụ abụọ a na-akpọ nhopkg, ebe a bụ njikọ: http://www.nhopkg.org/ y http://es.wikipedia.org/wiki/nhopkg, na onye njikwa ihe nkiri nhopkg-fe na njikọ: http://http://nhopkg-fe.sourceforge.net/ y http://es.wikipedia.org/wiki/nhopkg-fe.
Ndewo, abum onye linux, amaghi m nke oma na bekee (low level in Spain), mana achoro m ntuziaka ahu na Spanish ee ma obu ee ma achoro m ya na onwa ole na ole aghaghi ime oru iji meputa linux m. distro na ya achọrọ m, ọ bụrụ na m ga - enyere m aka ịkpọtụrụ m na - enweghị nsogbu, aga m enye gị azịza, ma kelee gị.
dario ebughibu dijo
Ndewo, enwere m mmasị na nsụgharị ahụ, nsụgharị nke oge a bụ 10.
Zaghachi Dario Delgado
Wụnye Ngwaọrụ Laptọọpụ Laptọọpụ 1.64 na nhazi nhazi na Ubuntu
Otu esi egbochi uzo TOR na Apache ma obu Nginx